Enweelarị ihe karịrị narị puku isii iji nweta iQOO Pro 600G | Androidsis
Enweelarị ihe karịrị 600 iwu tupu ị nweta iQOO Pro 5G
Na iQOO Pro 5G, ngwaọrụ nwere mmalite ụbọchị nke Ọktoba 22 -nke nke dị taa-, n'ime awa ole na ole. Agbanyeghị na ọ ga - ebu ụzọ bụrụ ọkwa na China tupu mba ọ bụla ọzọ, enweelarịrị narị narị puku ndị ọrụ nke ika a na ndị ọzọ ga - ahọrọ ịnwe ya n'aka ha ozugbo enwere ike zụta ya.
Onye na-emepụta China, nke na-arụ ọrụ dị ka a Vivo sub-ika, mere ka ama dị ọtụtụ ụbọchị, mana ọ bụghị na mgbe niile, mana ka ndị Fada ahụ nwee ọ whoụ nwere ike idobe ya tupu oge eruo iQOO mbụ malitere ọtụtụ ọnwa gara aga dịka ngwaọrụ mbụ nke ụlọ ọrụ na ụdị ndị ọzọ.
Onu ogugu nke iQOO Pro 5G nyere iwu rue oge elekere ole na ole gara aga bu 600 puku. N'oge a, ọnụ ọgụgụ ahụ agabigala, n'ihi ya, anyị na-eche ọnụ ọnụ na ugbua, n'onwe ya, nwere nnukwu ewu ewu n'etiti ndị ọrụ China na-enye ya ntuli aka nke obi ike, ọbụlagodi na ebuteghị ya.
Ekwentị mkpanaka, nke, dị ka aha ya pụtara, abịa na nkwado maka netwọkụ 5G, ga-elekwasị anya na ngalaba egwuregwu, nke chipset na-akwado Snapdragon 855 Plus Okwesiri ka o buru ya. O doro anya na ọ ga-enwe ọrụ ịgba egwu egwuregwu dị elu, yana atụmatụ ndị yiri ya nke ga-ahụ na, mgbe utu aha na-agba ọsọ, ọkachasị, ekwentị anaghị ata ahụhụ ọbụlagodi obere nsogbu, dị ka ikpo oke ọkụ ma ọ bụ ọtụtụ awa egwuregwu.
Batrị ga-abụ otu n’ime ike ya. Ebu ụzọ kwenye na nke a bụ ikike 4,500 mAh ọ na-abịa na nkwado maka ịkwụ ụgwọ ngwa ngwa. E gosipụtara ihuenyo nwere okpokolo agba belatara na ọkwa dị n'ime ya, ebe ekwuputara na ọ ga-edobe igwefoto nwere okpukpu atọ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Gam akporosis » Noticias » Enweelarị ihe karịrị 600 iwu tupu ị nweta iQOO Pro 5G
YouTube ga-emechi ọrụ izi ozi ya na Septemba
Google ji okpukpu abuo ahia ya na United States maka Pixel 3a